Fahalalahàna miteny · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Oktobra, 2018
Efa Hita amin'ny Teny Sinoa ny Torolàlana amin'ny Fitorahana Blaogy Miafina Anarana
Efa afaka alaina amin'ny teny sinoa ankehitriny ilay torolàlana "Anonymous Blogging" izay novokarin'i Ethan Zuckerman. Na izany aza, nomarihiny fa raha toa ka tsy ilaina ny manafina anarana dia iangaviana mba tsy hampiasa ireo paikady ao anatin'ity torolàlana ity isika.
Fehezam-boninkazo mena enina sy tapaka lohana ondrilahy: Fandrahonana ho faty ho an'ny gazety Rosiana tsy miankina iray
Napetraka teo am-baravaran'ny gazety Novaya Gazeta, fampahalalam-baovao mahaleotena any Moskoa ireo entana mampatahotra ireo, tamin'ny ezaka mazava handrahona sy hanampim-bava ireo mpanao gazety mpanadihady ao amin'ny gazety.
Shina: Fanadihadiana Twitter mikasika ny fialan'ny Google
Raha toa ka miandry ny fanapahan-kevitry ny Google mikasika ny hoavin'ny asany ao Shina ireo Sinoa mpampiasa Aterineto, nanomboka nanontany ireo mitovy aminy mikasika ny zavatra tokony hataon'ny Google ny mpampiasa aterineto iray ary inona no fiantraikan'izany raha toa ka manapa-kevitra ny hiala ilay orinasa.
Burkina Faso : Fahatsiarovana ny faha-10 taona namonoana an’i Norbert Zongo
Borkina Faso 29 Oktobra 2018
Folo taona lasa izay tamin’ny faha 13 ny volana Desambra 1998, no hita tao anaty fiara iray main’ny afo teo amin’ny lalan’i Sapouy, eo ho eo amin’ny 100 km miala ny renivohitra ny vata mangatsiakan’ilay mpanao gazety Norbert Zongo sy ireo olona telo niaraka taminy izay rotidrotiky ny bala